ခေတ်အမျိုးမျိုးမှ မြန်မာဟာသစာပေ (၂) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ခေတ်အမျိုးမျိုးမှ မြန်မာဟာသစာပေ (၂)	Posted by mm thinker on October 15, 2008
Posted in: Literature.	Tagged: Literature.	၈။ ခေတ်ပြောင်
အခက်တွေ ပွေလွန်းလို့လေး။ ထိုအချိန်လောက်ကပင် မောင်းထောင်ဦးကျော်လှ ရေးသော သံချို၌ “ခေတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီး ဟိုမျှော် ဒီမျှော် မလုပ်ကြနှင့်။ နောက်လာတဲ့ မောင်ပုလဲ ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲ” ဆိုသလို ဖြစ်နေမည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထိပ်ခေါက်ခံရသည့် မျောက်လို မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု အဓိပ္ပာယ်ပါသည့် သံချိုကို စပ်ခဲ့ပါသည်။ ကပ်မသမာ ဓာတ်ပါပဟာမို့
တချိန်က သီဟိုဠ်ပြန် ဦးဥာဏဝံသက ဓနုဖြူမြို့ ကျိုက်ကလွန်ပွန်ဘုရားတွင်း၌ ရုပ်ပွားတော်ကို နှုတ်ခမ်းမွှေးတပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ သူ့သဘောမှ ဘုရားဆိုလျှင် ပုရိသလက္ခဏာ ၃၂ ပါးနှင့် ညီညွတ်ရမည်မို့ နှုတ်ခမ်းမွှေးပါမှ တကယ်ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်မည် ယူဆ၍ဖြစ်၏။ ယင်းသို့သော သာသနာရေးသတင်းကို မန်လည်ဆရာတော်ကြီးကြားသိ၍ အောက်ပါဒွေးချိုးကို ရေးစပ် ဝေဘန်တော်မူခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းရယ်ပို
ထို့အတူ ဦးပုည၏ ဒေါနဆီ မေတ္တာစာမှာပါသည့် ရုပ်ပွားတော်မှာလည်း မသက်သာရှာပါ။ ဒေါနဆီဘဝမှ၊ စုတိမနေ၊ သေလွန်းပြီးလျှင်၊ အထောက်မတန်၊ ရေနံဘဝတွင်၊ ပဋိသန္ဓေ စွဲနေဖွားမြင်လာသည်ကို ဆရာလည်း မသိ၊ သတိလည်းမထား၊ ဘုရားတဆူ၌၊ ကြည်ဖြူစေတနာ၊ သဒ္ဓါစိတ်ပြေး၍၊ ဆီမွှေးပူဇော်မည်အကြံနှင့်၊ ရောင်လျှံတော် မဏိဦးက၊ ဖန်ဘူးစောင်း၍ လောင်းလိုက်ရာ၊ ရုပ်ရှင်တော် မြတ်စွာသည်၊ နံရှာတော်မူလွန်း၍၊ ရွှေခွန်းတော် မတုံ့၊ အနိုင်သာငုံ့ပြီးလျှင်၊ ရှုံ့၍ ခံတော်မူရချေသည်။
သပွတ်အူရာဇဝင် ရာဇဝင် တခဏ်းထုတ်ပေါ့
လူအချင်းချင်း ခနိုးခနဲ့ ပြောင်လှောင်ပြောဆိုခြင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် (Irony) ဟု ခေါ်သည်။ ယင်းသို့ အဖွဲ့အနွဲ့မျိုးမှာလည်း မြန်မာစာပေတွင် မရှားပါပေ။ ဆယ်အိမ်ခေါင်းမင်း၏ စည်းစိမ်ကို ဦးကြီးက ဖွဲ့ဆိုပုံ၌ – စည်းစိမ်ငယ်ကြီးပါဘိ
ယှဉ်လက်ပြိုင် ကျယ်စပျစ်ကယ်နှင့် ပွတ်သစ်မြေအင်ရံလို့
ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း စာဖွဲ့သည့်အလေ့ ထွန်းကားခဲ့သည်။ အညာသား မောင်ဖိုးတူဆိုသူက စာရေးဆရာကြီးကို ကပ်ယပ်ပြီး သူ့အတွက် ရေးပေးပါဦးဆို၍ အောက်ပါ ကဗျာတိုကလေး ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ လောင်းမင်းတရားရဲ့တူ
ဘိုးတော်ဘုရင်သည် အမတ်ဦးပေါ်ဦးကို အခြားမှူးမတ်များထက် ခင်မင်သည်။ ဘိုး တော်က ဦးပေါ်ဦးကို အခွင့်အရေးပေးပုံ သူငယ်ချင်းတမျှဆက်ဆံပုံတို့ကို အချို့မှူးမတ်များ က မနာလိုသဖြင့် ဘုရင်နှင့် ဦးပေါ်ဦးတို့ အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် တီးတိုးဖန်တီးကြ သည်။ ဦးပေါ်ဦးက ဘိုးတော်ကို “ပေါကြောင်ကြောင်နိုသည်ဟုဆိုကာ တခြားမင်းသားတ ပါးကို နန်းတင်ရန် ဘိုးတော်ကို ဖြစ်သည့်နည်းနှင့် ဖြုတ်ချရန် ကြံစည်နေသည်”ဆိုသော သတင်းများကို ရွှေနားတော်ပေါက်အောင် ၀ါဒဖြန့်ကြ၏။ အစတွင် သတင်းများကို ယုံကြည် မှုမရှိသော်လည်း မိဖုရားများက စိုးရိမ်သည်အထိ ဖြစ်လာကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်က ဥပါယ်တံမျဉ်ဖြင့် စုံစမ်းလို၍ တနေ့သ၌ ဦးပေါ်ဦးအား အနီးသို့ခေါ်၍ တိုင်ပင်သည်မှာ ဘုရင် ။ ။ ပေါ်ဦးရေ၊ ငါတော့ ရှင်ဘုရင်လုပ်ရတာ တော်တော်ကြီး ငြီးငွေ့နေပြီ။ ဒါကြောင့် တောထွက်ဘို့ စိတ်ကူးမိတယ်။ မင်း ဘယ်လိုသဘောရလဲ။
ဟာသနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားစရာအချက်အချို့ ရှိနေပါသည်။ လူ့လောကတွင် ရယ်ခြင်းနှင့် ငိုခြင်းဟူ၍ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်မျိုးရှိရာတွင် ရယ်ခြင်းမှာ ကောင်ေးသာအမူအရာ၊ ငိုခြင်းမှာ မကောင်းသောအမူအရာဟု အကြမ်းအား ဖြင့် ခွဲခြားမှုများ ရှိနေပါသည်။
ဤတွင်ကောင်းသော အမူအရာကို ရှုတ်ချ၍ မကောင်းသောအမူအရာကို အလေးပြုသော အလေ့အထများလည်း ပေါ်ပေါက်နေပါသည်။ ဟာသဟူသော ရယ်ရွှင်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးသူကို လူပြက်ဟူ၍၎င်း၊ လူပေါဟူ၍၎င်း ယူဆတတ်ကြပါသည်။ ရယ်မောသူလည်း အပြစ်မလွတ်ပါ။ အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိသူသည် ရယ် မောရာ၌ အတိုင်းအထွာရှိသည်။ သဘာဝကျကျ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မော်တတ်သူ များကိုကား သိက္ခာမဲ့သည်ဟု လူပြတ်များလိုပင် ရှုတ်ချပြစ်တင်ခြင်း ပြုလေ့ရှိပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ပဋာစာရီ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို လေ့လာလျှင် ရယ်ခြင်းနှင့် ငိုခြင်းတို့ ပေါင်း စပ်ရာမှ ကောင်းမြတ်သော ထေရီမကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွား၏။ ကိုဒါသနှင့် သမီးရည်း စားဘ၀သည် ပျော်ပါးချိန်ဖြစ်၏။ လင်သေ၍ သားဆုံးပြီးနောက် ပဋာစာရီအဘို့ အပူခန်း ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကို ခံယူပြီးနောက် တရားရသောအခါ ကောင်းရာ သုဂ တိသို့ ရောက်ရှိသွား၏။ ထို့ကြောင့် ရယ်ခြင်းသည် မကောင်း၊ ငိုခြင်းသည် ကောင်းသည် စသောခွဲခြားမှုများ တထစ်ချမှတ်ယူခြင်းမပြုဘဲ ၄င်းတို့၏ အညမညသဘောတရားကိုလည်း သတိပြုသင့်ကြ ပေသည်။
← ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း၊ ဗော်ဒဂါတစ်ပုလင်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်	MOE (ခေါ်) ဝီကီမြန်မာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ →	Pages	about